Nezvedu - Shenzhen Tbit Technology Co., Ltd.
Shenzhen TBIT Science uye Technology Co, Ltd yakavambwa muna 2007. Iyo iri kuita mukupa njere tekinoroji yekushandisa mhinduro pane akagovaniswa nzendo uye maviri-mavhiri (EBike \_ EScooter \_ Motocycle) kuitira kubatsira vatengi kuve vashandisi veMicromobility.
Mushure mekuenderera mberi kwekuvandudza uye hunyanzvi kweanopfuura makore gumi, TBIT yakave mutungamiri pakati pevachena brand vanopa ehungwaru maviri-mavhiri mhinduro uye yakapa anopfuura mamirioni gumi mamirioni eIOT kune maviri-mavhiri vatengi pasirese.
(1) Mune iyo nguva-yekugovana (yakagovaniswa maviri-mavhiri) minda yemaviri-mavhiri, TBIT yakapa yakagovaniswa yakagovaniswa IOT uye APP Hardware uye software mhinduro kune vanopfuura mazana maviri maanoshanda uye yakasimbisa kudyidzana kudyidzana nematanho makuru eBicecle \_ EBIKE \_ ESCOOTER . TBIT ine ruzivo rwakapfuma mukupa inotsigira michina yeIOT uye seti izere yeOEM masevhisi ekutanga ongororo yekufungidzira - kugadzirwa kwemotokari uye kugadzira uye kutsigira- kuchaja kugadzirwa kwemakabati uye kugadzira - APP / Cloud SERVICES.
(2) Isu takapa akapatsanura IOT uye APP mhinduro kune maviri-mavhiri ekuhaya vanoshanda uye aseti chengetedzo vimbiso kune vatengi. Tinogona kusangana pakati nepakati uye kwenguva refu-yekuhaya zvido zvevashandisi uye kubatsira vanhu vasina mota kuti vave vatyairi vekutora kana kufamba nemaviri-mavhiri kuburikidza nekuhaya mota.
(3) Tine tarisiro yekupa mhinduro dzakangwara dzevashandisi veC-end maviri-mavhiri uye isina kukosha uye nhare yekudzora ruzivo kuti vawedzere ruzivo rwekushandisa kwavo mota.
TBIT inopawo zvigadzirwa zvekumisikidza mota kune mana-mavhiri kuitira kuti vakwanise kubata zvikepe uye voongorora maitiro ekutyaira (musika weUBI).
TBIT iri kuita mukusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwemabhasikoro akagovaniswa, vakagovana scooter, smart mabhasikoro / midhudhudhu uye IOT emabhasikoro emabhasikoro. Muminda ine chekuita nemaviri-mavhiri, TBIT yakagadzira zvigadzirwa zvine hungwaru zvinogadzirwa uye zvigadzirwa zvepuratifomu, zvinosanganisira nhare dzekudzora nharembozha, mota yemagetsi akangwara madhibhodhi, ma locator ebhatiri, mota dzemagetsi & mapuratifomu ekuhaya bhatiri, nezvimwe. nzvimbo dzemotokari, midziyo yemota, kukiya mota, mabhureki emabhureki, bhatiri BMS, mwenje, ma controllers nemimwe midziyo yemota uye kuzadzisa chinangwa cheyakagovaniswa uye yekugovana-nguva-yekuroja kana mashandiro akangwara
Kambani yedu inopa vatengi neese akateedzana ezvigadzirwa nemasevhisi, kusanganisira ekuvandudza masevhisi emagetsi emagetsi, akangwara ECU, mushandisi maAPU, mashandiro nekuchengetedza maAPU, mapuratifomu ekutungamira uye zvichingodaro. Isu tinogara tichitungamira mukugadzira tekinoroji yekushandisa mitsva yekugovana maviri-mavhiri uye isu tinokwanisa kugadzirisa zvakakwana matambudziko eazvino indasitiri kuburikidza nekushandisa gyroscope-based vertical kupaka tekinoroji, RTK yakakwira-chaiyo yekumisikidza, RFID / Bluetooth spike yakagadzika-poindi mota kudzoka uye kumeso kuzivikanwa tekinoroji.